Madaxdii Gaartay Kismaayo Oo Yeeshay kulamo U Muuqda Dhoolatus Siyaasadeed.(Sawirro) – Awdalmedia
Madaxdii Gaartay Kismaayo Oo Yeeshay kulamo U Muuqda Dhoolatus Siyaasadeed.(Sawirro)
Waxaa magaalada Kismaayo ka socda galabta illaa caawa kulamo u muuqda dhoolatus siyaasadeed oo ay sameynayaan madaxii maanta gaartay halkaas si ay uga qeyb galaan caleemo saarka Aaxmed Madoobe.
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid C/llaahi Deni iyo siyaasiga wayn ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo gaaray Magaalada Kismaayo ayaa la kulmay Madaxweynaha Jubbaland iyo Madaxdii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo horay ugu sugnaa Kismaayo.
Masuuliyintan qaarkood oo sanado ka hor iska soo horjeeday siyaasad ahaan ayaa arrinta kaliya ee ay ka mideysan yihiin waxay tahay mucaaradnimada dowlada ay hogaamiyaan Madaxweyne Farmaajo iyo raisul Wasaare Khayre.
Waxay baraha bulshada soo dhoobeen markii ay Kismaayo tageen ka dib sawiro iyagoo koox ah oo wada qoslaya, isla markaana gacmaha is heysta taasoo dad badan u fasirteen fariin lagu xumeynayo dowlada federaalka maadaama uu fashilmay isku daygeeda ahaa iney carqaladeyso caleemo saarka Axmed Madoobe.
“Madaxda Kismaayo tagtay badankood uma tegin halkaas jaceyl iyo maxabo ay u qabaan Axmed Madoobe ee waxay u tageen iney ku xumeeyaan dowlada federaalka maadaama ay horey u sheegtay ineysan aqoonsaneyn doorashadiisa” sidaas waxaa yiri aqoonyahan Prof. Xasan Warsame oo nasiib daro ku tilmaamay ficilada ay ku dhaqmayaan madaxdii hore ee qaranka iyo siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood.
Madaxweynaha Jubbaland oo Kismaayo kusoo dhaweeyay ayaa sheegay in ay farxad u tahay in Madaxdii hore ay yimaaddaan Magaalada Kismaayo si ay uga qeyb galaan Caleema saarka.
Caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa maanta u tagay Kismaayo Wafdigii ugu badnaa oo isugu jira Siyaasiyiin, Xildhibaano, Waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Saddex Madaxweyne goboleed oo gacan saar la leh dowlada federaalka ayaan tegin Kismaayo, iyadoo Madaxweynaha Puntland uu keli ku noqday ka qeyb galka caleemo saarka Axmed Madoobe.
Booliska Uganda Oo Ku Guul-daraystay Inuu Xidho Siyaasiga Qoorta Kaga Maran Musaveni.